आफ्नो घर ठिक भए मात्रै चुनौती दिन सकिन्छ : महामन्त्री कोईराला - Darpanpost
» प्रमुख समाचार » राजनीति » समाचार अंक: 10843
आफ्नो घर ठिक भए मात्रै चुनौती दिन सकिन्छ : महामन्त्री कोईराला
Darpanpost बिहिबार, साउन १०, २०७५ मा प्रकाशित
नवलपरासी , १० साउन । नेपाली काङ्गेसका महामन्त्री एवम् नवलपुर प्रतिनिधी सभा सासंद डाक्टर शशांक कोईरालाले पहिले आफ्नो घर ठिक बनाए मात्रै अरुलाई चुनौती दिन सकिनेमा जोड दिएका छन । कोईरालाले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर एकै ठाउमा उभ्याए मात्रै नेकपाको सामाना गर्न सकिने बताए । ३६ औ विपी स्मृती दिवसको अवसरमा नवलपरासी पूर्व कावासोतीमा नेपाली काङ्गेस जिल्ला कार्य समिती नवलपरासीको आयोजनामा भएको विचार गोष्ठिमा बोल्दै कोईरालाले सो कुरामा जोड दिएका हुन । कोईरालाले भने – ‘सबभन्दा पहिले त हाम्रो घरै ठिक गर्नुपर्छ , हाम्रो घरै ठिक छैन , गुट उपगुट छ । नेपाली काङ्गेस एक ढिक्का नभएसम्म एमाले माओवादिको सामाना गर्न सक्दैनौ । ’
कोईरालाले आउदो अधिवेशनमा एकताको अधिवेशन हुनुपर्ने भन्दै कुनै पनि गुटउपगुट नभएको अधिवेशन आफुले हेर्न चाहेको बताए । उनले भने – ‘मैले त धेरै चोटी भने रामचन्द्र दाईलाई नी भने शेर वहादुर जिलाई भने नेपाली काङ्गेसलाई एकजुट बनाएको खण्डमा मात्रै कङ्गेसको बाहुल्यता छ । ’
विपीले आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्मान, माया र आत्मियता प्रदान गरेकै कारण विपी आज सबैको माझ लोकप्रिय रहेको बताउदै । विपीको विचारलाई अबलम्बन गरेर नेपाली काङ्गेस अगाडी बढ्नुपर्नेमा समेत कोईरालाले जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाली काङ्गेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले समेत सम्बोधन गर्दै विपीको सिद्धान्तलाई नेपाली काङ्गेसका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले बिर्सन नहुनेमा जोड दिए । विपीको सिद्धान्त आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको भन्दै उनले विपीले देखाएको बाटोमा हिड्न सकेमात्रै अबको काङ्गेस बलियो हुने बताए ।
कार्यक्रममा नवलपरासी प्रतिनिधी सभा सासंद कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि बोलेका थिए । प्रदेश सासंद तथा नेपाली काङ्गेस जिल्ला कार्यसमितीका सभापती विष्णु प्रसाद लामिछाने को अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दुई वटा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यपत्र माथी प्रा. डा. ज्ञानेन्द्र पौडेलले टिप्पणी गरेका थिए